I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Abadlali bebhola ekhatywayo baseCameroonia
I-Nick Pope Ubuntwaneni Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-Francisco Trincao Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
UWilliam Saliba Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Fabio Silva Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
USergio Reguilon Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
bonkeAbadlali bebhola ekhatywayo baseCamerooniaAbadlala ibhola yeGhanianAbadlali beBhola eKhatywayo base-Ivory CoastAbadlali bebhola baseNigeriaAbadlali bebhola baseSenegal
I-Edouard Mendy Ibali lokuKhula koMntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Andre Onana Ibali loBuntwana beNqaku leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-Allan Loureiro Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
UGabriel Magalhaes Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Emiliano Martinez Ibali loBuntwana kunye neNqaku leMbiniso ye-Emoldano
Ikhaya UMPHATHI weFOOTBALL I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo loMphathi webhola owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Igosa lezendlela". Ibali lethu le-Unai Emery Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nembali yakhe yokuphatha kunye neSevilla kunye ne-PSG. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa ngabakwa-Unai Emery's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguUnai Emery Etxegoien. Unai Emery wazalwa ngosuku lwe-3rd kaNovemba 1971 eHondarribia, eSpain. U-Unai Emery wazalelwa kubazali bakhe; Igama likayise nguJuan Emery kunye negama lomama ngu-Amelia Etxegoien.
U-Unai wazalelwa kwimvelaphi yentsapho eqinile. Uyise kunye nomkhulu wakhe, ogama linguJuan no-Antonio ngokulandelanayo, bebanabhola bebhola, bobabini begosa. Kwaye umalume wakhe ogama linguRoman wadlala njengomdlali. Ekubeni eyazi ukuba unemvelaphi yentsapho yabacebisi bebhola, iinjongo zakhe zokuba ngumdlali webhola lebhola ngokwakhe akazange abe yinto ehamba phambili. Nangona wayefuna umdlalo webhola, Wayekholelwa ukuba ukugqiba isikolo esiphakamileyo kufuneka kufike kuqala. Ngethuba esikolweni esiphakeme, u-Unai Emery wafumana ezininzi amathuba okudlala ngokukhawuleza umdlalo webhola ukhuphiswano ikakhulukazi ngexesha lezemidlalo.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi kwiSishwankathelo
U-Unai Emery waqala umsebenzi wakhe wobutsha ngexesha elide kakhulu (iminyaka eyi-16 ubudala) kwibala lebhola lebhola, i-1986. Iimvelaphi ezinemvelaphi yentsapho yemidlalo yebhola, injongo yakhe yokuphumelela naphezu kokuqala kokuqalisa umsebenzi emva kokubukela Diego Maradona I-single-handedly ihola iqela layo lase-Argentina kwiNtshontsho yeNdebe yeHlabathi.
U-Unai Emery ngokuzimisela kwakunokunyuka kweemeteor ngaphezu kwazo zonke iintshukumo zokudlala ibhola ngexesha lokuqala kweentsuku zakhe zokungafani nentsha eninzi, yaphela emva kweminyaka eyi-4. Ngonyaka we-1990, wathunyelwa kwiqela le-Real Sociedad B apho wavuka ngaphezu kwayo yonke ibhola lebhola lebhola. Emva kokuphakanyiswa kwiqela le-Real Sociedad eliphezulu, u-Unai Emery wayezigulisa isigulane kwaye wagqiba ekubeni atshintshe iiklabhu.
Wachitha lonke umsebenzi wakhe kwiinkampani zesibini zeSpain (i-Racing Ferrol, iLeganos kunye neLorca Deportiva CF) phambi i ntlekele. Ngeminyaka eyi-32, u-Unai Emery wahlaselwa ngumonakalo oguqisayo wamadolo owabona ukuphela kokukhawuleza nokubuhlungu kumsebenzi wakhe obalaseleyo.
Emva kokulimaza idolo kunye nokunyanzeliswa ukuba abe ngumhlala-phantsi njengomdlali, wanikwa inxaxheba yomphathi kwiqela lakhe lokugqibela uLorca Deportivo owayebonise ukuqala kolawulo lwakhe lwempumelelo. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ubuchule be-Unai Emery kunye neendlela zokuphila, kunye nendlela yakhe yokuphila ngaphandle komdlalo, wakhela umfanekiso opheleleyo.
Unai Emery utshatile uLouisa Fernandez owazalelwa eMalaga. Ngokomthombo waseSpain, uLouisa wadibana nomyeni wakhe eMadrid kwivenkile yokutyela ayeyisebenze. Ngaloo mzuzwana badibana, u-Unai wayenandipha isidlo sokuthula kunye nabanye abahlobo ababeyazi uLuisa. Aba bahlobo bamnceda ukuba enze ukudibanisa ngoLousia omhle u-Unai Emery amthandayo ukusuka kude. Baye baqalisa ukuzisa u-Unai kuLousia kunye nothando lwabo oluye lwahlala kulo nyaka lukhishwe.
Umtshato weebhandi zokuthandaza ekugqibeleni weza kwi-1998. Unai nomfazi wakhe othandekayo ngabazali abaziqhenyayo ngonyana onguLander Emery uFernandez (ukufanekiswa ngezantsi kunye nomama wakhe noyise) owazalwa ngomhla we-29 ngomhla ka-Matshi 2003, eMadrid.
Ibhola impela imithi yegolide ye-Unai Emery Family. Njengoko sibhala, kukho isizukulwana sesine sempumelelo yebhola ekhaya. Indodana yakhe egama linguLander Emery uFernandez ukhetha ukuba ngumgcini-njongo njengobaba wakhe omkhulu nozukileyo. Udlala iValencia njengokuba ngexesha lokubhala.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iinkcukacha zobomi bomntu
Ngethuba lakhe elithile, u-Unai ujongene nokuxuba phakathi kwe-squash ne-tennis. Ngethuba nje njengomphathi waseSevilla, wayeyaziwa ngokuthatha abadlali be-Sevilla kwisethi okanye ezimbini ezibanceda baphumule ngexesha lekhefu lebhola.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iqhayiya kunye ne-Dress Sense
Ngoxa wayeseSpeyin, ukunyaniseka kuka-Unai ngokukhawuleza kwamenza isiteketiso 'Guardia Urbano'(Igosa lezendlela).
Njengoko kubonwe ukusuka kumfanekiso apha ngezantsi, u-Unai uphinde ube ngumgcini we-stylish and stylish dresser. Ujwayele iimpawu zebhola ezibomvu zezemidlalo kwiijethi zakhe.
Isambatho sakhe esibomvu simboli sasinxibe kakhulu ngexesha leentsuku zakhe zeSevilla. Nangona, kubonakala sengathi u-Unai Emery uye wathetha loo mifanekiso yengubo kungekudala mhlawumbi ngenxa yengqwalasela yeendaba rhoqo efumana indlela yokudibanisa nokugxilwa kwakhe kwengcali.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Isitayela seVideos yoQeqesho
U-Emery uyinyaniso enokuthi achithe iiyure ezininzi efunda iividiyo zabanto ngaphambi kokuba angene entsimini ngokumelene nabo.
Umdlali wokuqala waseSpain Joaquin wambi wachaza ngamagama alandelayo;
"U-Unai ukhangeleke kakhulu ngebhola. Kukho ukugula. Ungomnye wabaphathi ababalaseleyo. Ndasebenza naye iminyaka emithathu. U-Emery wafaka iividiyo ezininzi kangangokuba ndaphuma kwiPokcorn xa ndandwendwela! "
I-Asides ibukela ividiyo yabamelene nayo, u-Unai nayo igxininisekile ukuba abadlali bakhe bajonge iividiyo zabo. Ngethuba lokubusa kwakhe uValencia, umSpaniard wanikela umdlali ekhankanya ukuba akayi kukhangela umboniso wepen drive (flash drive) ukuze aqiniseke ukuba uza kudlulisela iividiyo zakhe kwi laptop yakhe aze abukele konke alahlekile. Ngamazwi akhe;
"Kulo mdlalo, ndingasebenzisa iiyure ze-12 kwividiyo yecala,"
UUna Emery wachaza.
I-Unai Emery Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Uthanda iWebhu yakhe
Njengoko ezinye iimveliso zeendaba zibize kuye, u-Unai Emery nguwe YezoLuntu iMidiya. Unesayithi elisemthethweni [www.unai-emery.com] apho uhlaziya rhoqo ngezithuba zeblogi kunye namanqaku acacisayo achaza imimiselo ebanzi ebomini bakhe.
Kwakhona, u-Unai Emery uthanda ukwenza i-website yakhe inxibelelwano. Unobumba obuninzi beblogi owamthanda ukumema abalandeli ukuba baqikelele ukuqala kwakhe XI ngemiklomelo emangalisayo yokuqagela ngokuchanekileyo.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iNdaba yethu ye-Unai Emery yabantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
I-PSG yeDlalo yeBhola
Iphepha lebhola lebhola leSevilla
Iinyaniso ze-Yacine Adli zobuntwana kunye neNqaku le-Biold ye-Yacine
UDan-Axel Zagadou Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Iinyaniso ze-Quique Setien zabantwana kunye neNqaku le-Biology le-Quold
Amanqaku kaLuis Muriel Ubuntwaneni beNqaku leNqaku leNqaku leBantwana kunye ne-Untold Biography
Umhla oLungisiweyo: nge-23 kaSeptemba ngo-2020
Umhla oLungisiweyo: nge-19 kaSeptemba ngo-2020
Umhla oLungisiweyo: nge-16 kaSeptemba ngo-2020
Umhla oLungisiweyo: nge-13 kaSeptemba ngo-2020
I-Jay-Jay Okocha Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Alex Oxlade Chamberlain Ibali leNgcaciso yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ULucas Torreira Ibali leBantwana kunye neNgxelo ye-Untold Biography Facts
IGeorge Weah Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Petr Cech Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts